नेपालका कोरोना संक्रमितमा औषधि परीक्षण – Health Post Nepal
२०७७ असार १५ गते ८:१४
नेपालमा कोरोना संक्रमितलाई विभिन्न प्रकारका औषधि परीक्षण सुरु हुने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा कोभिड अस्पतालमा रहेका संक्रमितमा परीक्षण गर्ने तयारी भएको हो। कोरोना भाइरसको हालसम्म कुनै प्रामाणिक उपचार वा खोप हालसम्म बनेको छैन।
भाइरसविरुद्ध परीक्षण भइरहेका अधिकांश औषधिहरु चलनचल्तिका रहेका छन्। त्यसै, अनुरुप नेपालमा विभिन्न रोग विरुद्धको औषधीले कोरोनाका संक्रमितमा कति प्रभावकारी देखाउँछ भन्ने उदेश्यका साथ अनुसन्धान गर्न लागिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धान प्रमुख मेघनाथ धितालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार संगठनले स्वीकृत दिएका औषधिको प्रयोग गर्न लागिएको हो। जसमा इबोला रोगविरुद्ध प्रयोग हुने रेम्डेसिभिर, एचआइभी एड्समा प्रयोग हुने लोपिनावीर र रीटोनावीर, डेक्सामेथासोन जस्ता औषधिको परीक्षण गर्न लागिएको हो। ‘करिब १५ कोभिड अस्पतालका ८ सय हाराहारीका संक्रमितमा परीक्षण गर्न लागिएको हो, हेल्थपोस्टसँग कुरागर्दै डा. धितालले भने,‘ विशुद्ध कोरोनाका औषधि होइन। अन्य रोगका औषधिले कोरोनका संक्रमितमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भनेर प्रयोग गर्न लागिएको हो।’
स्वास्थ्य संगठनको समवव्यमा विश्वका १ सयभन्दा बढी देशले परीक्षण गरिसकेको छन्। यि औषधिले केहि हदसम्म संक्रमतिको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएका छन्।
सबै प्रक्रिया पुरा भएको र केहि दिन भित्रैमा परीक्षण गर्न सुरु गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। ‘संक्रमितको स्वीकृत अनुसार परीक्षण गर्र्छौ, उनले भने,‘ यसको लागि टिम गठनको काम भइरहेको छ।’
विभिन्न अनुसन्धानमा लोपिनावीर र रिटोनावीरले पनि केहि हदसम्म निको भएको पाइएको उनको भनाई छ। त्यसैगरी, डेक्सामेथासोन स्टेरोइड पछिल्लो समय, चीन, युएसजस्ता देशहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन्।
नेपालमा कोभिड का बिरामीलाई यि औषधि प्रयोगको सम्भावना रहेको छ?
विभिन्न देशमा गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा रेम्डेसिभिरको प्रयोगले सिकिस्त भएका संक्रमितमा केहि सुधार आएको पाइएको छ। यो औषधिको प्रयोगले केहि हदसम्म राम्रो गर्ने अस्पतालको भर्ना दर घटाउने वा रिकभरी चाडैँ हुने देखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोला बताउँछन्।
शरीरले कोरोनाभाइरस लड्ने क्रममा उक्त सङकमणले जलन उत्पन्न गराउँछ। तर, कहिलेकाहीँ प्रतिरक्षा प्रणाली अत्याधिक सक्रिय भइदिन्छ र यो प्रतिक्रिया घातक सिद्ध हुन सक्छ ।
संक्रमणसँग जुझ्न बनेका प्रतिरक्षा नै शरीरिका कोषलाई आक्रमण गरिदिन्छ।
डेक्सामेथासोनले यसको प्रभावलाई न्युनीकरण गने देखिएको छ। डेक्सामेथासोन निमोनिया सुरु भएर अक्सिजन, तथा भेन्टिलेटर चाहिँने मानिसलाई उपयुक्त हुन्छ। ‘डेक्समिथासुल जसले विशेष गरेर अक्सिजन कम भएका संक्रमितलाई दिँदा सिविभर नभएको पाइएको छ, उनले भने,‘यी सबै औषधि अनुसन्धान कै क्रममा रहेका छन्। खाएपछि निको भइहाल्ने तथा ठीक भइहाल्ने पुष्टि भएको छैन।’
क्रिटिकल बिरामीको अवस्था हेरेर यी औषधि चलाउनको लागि संठगनले स्वीकृत दिएको छ भने, रेगुलर प्रयोगको लागि अनुमति दिएको छैन। अध्ययन–‘अनुसन्धनकै क्रममा रहेका कारण विस्तारै नतिजा आउँला’ उनले भने।